Lisi-pifidianana Hohalavaina 20 andro ny fe-potoana hanamarinana anarana
Ny 01 desambra 2019 no nisokatra ny lisi-pifidianana ka ny 15 febroary lasa teo no fe-potoana farany hanamarinana izany.
Ny 28 febroary izao kosa no voafaritra fa hohamarinina vonjimaika ny lisitra. Nohalavaina ho 20 andro indray io fe-potoana io noho ny fahitana fa ambany dia ambany ny taham-pahavitrin`ireo olom-pirenena nanamarina sy nisoratra anarana. Araka izany, haverina eo aniivon` ny fokontany ny lisitra manomboka ny 05 martsa izao. Azo raisina ho tombony io fanalavana fe-potoana io. Mila hamafisina ny fanentanana sy fanabeazana olo-pirenena vanona mba tsy hiandry fotoana farany.